Ihowuliseyili PVDF lokucoca ulwelo iCartridge kunye nabathengisi | Isihluzi seRiqi
Isihluzi sePVDF seCartridges seMicron sokucoca iCartridges yeHydrophobic PVDF yeembumbulu zecoldriji zenzelwe ukucoca igesi kunye nokucoca umoya.Zonke iindawo zecartridge yokuhluza zikumgangatho ophezulu wokuhlangabezana neemfuno zekhemesti. Ulwakhiwo olukhethekileyo lwe-membrane pore lubamba ibhaktiriya esebenzayo. Imeko engqongqo yemveliso kunye novavanyo ziqinisekisa ukhuseleko lokuhluza. Inwebu ephezulu yomthamo inika amandla okuphatha ubumdaka, ukugqwesa okugqwesileyo kunye nokusebenza kakuhle kwamasuntswana r ...
Micron lokucoca ulwelo iCartridge
I-hydrophobic PVDF ye-membrane filter cartridges zenzelwe ukucoca igesi kunye nokucoca umoya.Zonke iindawo zecartridge yokucoca zikumgangatho ophezulu wokuhlangabezana neemfuno zekhemesti. Ulwakhiwo olukhethekileyo lwe-membrane pore lubamba ibhaktiriya esebenzayo. Imeko engqongqo yemveliso kunye novavanyo
qinisekisa ukhuseleko lokuhluza.
Inwebu ephezulu yomthamo inika amandla okuphatha ubumdaka, ukugqwesa okugqwesileyo kunye nokugcinwa kokusebenza kakuhle kwamasuntswana.
Isiseko esifanelekileyo kunye nekheyiji zizinto ezivela eKorea
yenza into echithakeleyo iphantsi kakhulu;
▶ Akukho zixhobo zokuncamathelisa, izibophelelo, okanye izixhobo ezisebenza ngokudibeneyo ezisetyenziselwa inkqubo yokunciphisa ukunciphisa ukukhutshwa;
▶ Ukuveliswa kwigumbi elinekhulu kwigumbi elicocekileyo kunye nokuhlanjwa kwamanzi okusulungeka kuqinisekisa ubunyulu kunye nokunciphisa ukukhutshwa kunye nexesha lokuphumla.
▶ Iipesenti ezili-100 zokucoca ulwelo zavavanywa ukuthembeka ziqinisekisa ukhuseleko lokuhluza.
Imithombo yeendaba yokuhluza Inwebu yeHydrophobic PVDF
Inkxaso yeendaba PP non-ephothiweyo
Inkcitho I-PP okanye i-PP enelayini engenazingcingo
Ububanzi obungaphandle Φ69mm
Ububanzi bangaphakathi Φ32mm
Ubude 2.5 ~ 40 "
Isangqa Abicah, EPDM, zilahlwe, Viton, PTFEncapsulating Viton
Inqanaba lokugcina I-0.1, 0.22, 0.45, 1.0, 3.0μm
Indawo yokuhluza esebenzayo .0.65m²
Ixabiso le-PH 2 ~ 13
Ubushushu obuqhelekileyo bokusebenza Iifayile ezingama-65
Ubukhulu. lobushushu yokusebenza 90 ℃, ΔP≤0.10Mpa
Ubukhulu. uxinzelelo umahluko 25 ℃, Phambili ngo-0.42Mpa, ubuyisele umva i-0.21MPa
Endotoxin <0.25EU / ml
Ukukhupha <0.03g / 10 "iCartridge
Inzalo Ukutshiswa kwentambo kwimizuzu engama-30 ngo-121 ℃，Iimjikelezo eziyi-100
Egqithileyo Iifayile zeFayile zokucoca
Okulandelayo: Ukuhanjiswa kwomoya